“कति बेला कसले टाउको फुटाउन आउने हो, थाहा हुन्न ।”
झम्लङ्ग पालेको कपाल, स्वयम्भुको आँखा इम्ब्रोइडरी गरेको कालो टिसर्ट, हाफ पाइन्ट र रातो–रातो देखिने जुत्ता, उनी हेर्दा अठ्ठाइस तीस वर्षको जस्तो देखिन्थे ।
म अघि बढेर उनीसँग गफ शुरु गरें ।
यहाँ बारहरुमा र अन्त पनि मादक पेय पदार्थ हेन्डल गर्न स्वीकृति लिनु पर्छ । मेरो कामको लागि आरएसए सर्टिफिकेट चाहिन्छ भनेपछि म ट्रेनिङ्ग लिन गएको थिएँ । त्यहाँ धेरै भर्खरैका केटाकेटीहरु त्यही प्रमाणपत्र लिन आएका थिए । त्यो लिएपछि मात्र रक्सी बेच्न पाइन्छ ।
रिस्पन्सिबल सर्विस अफ अल्कोहल ।
“अनि अहिले काम केमा छ त साथी ?” मैले सोधेँ ।
“बारमा । शुरु त गरिसकेको छु, मसँग आरएसए सर्टिफिकेट छ भनेर । फेरि माग्यो भने त चाहियो नि, त्यसैले ....”
आधा घण्टाको ब्रेक सकियो । उनले चुरोट पिए, मैले पानी । कुरा गर्दै जाँदा, उनी निकै धनी बाबुका छोरा रैछन्, मैले थाहा पाएँ । नेपालमै डाक्टरी पढेर, दुई वर्ष डक्टर भएर काम गरेर पनि विदेशिएका, अस्ट्रेलिया ।
मैले भेटेका यिनी पाँचौँ नम्बरका डाक्टर सा’ब हुन् ।
मैले भेटेको मध्ये एक पनि जनाले डाक्टरी काम गरेका छैनन् यहाँ । कोही नयाँ बिजनेस गर्दैछन्, कोही सुपर मार्केटहरुमा काम गर्दैछन् । अर्का एक जना बिहान बिहान यहाँको युनिभर्सिटीमा क्लिनिङ्ग काम गर्दैछन् ।
“त्यत्रो खर्च गरेर पढ्यो, पढाइ सकेपछि काम सुरु गर्नु पर्ने बेलामा धेरै राजनीति गर्नु पर्छ । अब धनीहरुले त आप्mनै प्राइभेट नर्सिङ होम खोल्छन्, प्राक्टिस सुरु गर्छन्, तर छात्रवृत्ति पाएर पढ्नेहरुको भने बिजोग हुन्छ । कोही त राजनीति गर्न लाग्छन्, यसो दुईचार जनाको पछि लाग्यो, पैसा खुवाएर पनि जागिर शुरु गर्छन्”, उनले सुनाए ।
“पढाइ, खुबी, क्षमता, दक्षता भन्दा पनि राजनीति ठूलो कुरा हुने है ?” मैले सोधेँ ।
“सबै पैसाको खेल हुन्छ । हुन त भर्ना गर्ने बेला पनि त खुबै खेला हुन्छ पैसाको । कस्ता कस्ता ट्यालेण्टहरुलाई मन्त्रीहरुको डाइरेक्ट फोर्स आएर हटाउँदा रै’छन् । अनि पैसावालाको छोराछोरीहरुको नाम घुसाउने,” उनले भने ।
मलाई भने यो मान्छे आप्mनै क्षमताले पढ्यो होला कि बा’को सम्पत्तिको बलले उसले भनेझैँ सिपालुहरुलाई हटाएर पढेको होला भनेर सोच आयो ।
“मेरो त ड्याडले पनि नर्सिङ होम खोलिदिन्छु, यहिँ बस् भन्दै हुनुन्थ्यो, तर म त एक पटक भए’नि विदेश त जान्छु भनेर हिँडे । ममीले सँधै फोनमा कहिले आउँछस्, अब बिहे गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । यहाँ आफू चाहिं आरएसए गर्न हिँडिरा’छु ।”
“किन, तपाईंलाई डक्टर बन्न मन लागेको थिएन ? अरुले कर गरेर पढ्नु भको हो ?” मैले मन्त्रीलाई फोर्स लगाएर पढेको हो भनेर सोध्न भन्दा यसरी सोध्दा कुरा सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो ।
“त्यस्तो त होइन । डक्टरहरुले खुब पैसा कमाउँछन् भनेर पढेको । म त फ्रैङ्क मान्छे । मेडिकल कलेजको पहिलो दिनको पहिलो क्लासमा टिचरले ‘तिमीहरु किन मेडिकल पढ्न आइपुग्यौ ?’ भनेर सोध्दा पनि मैले यही भनेको थिएँ ­ पैसा कमाउन । सबै हाँसे । धेरैले समाजलाई सेवा गर्न, दुःखीहरुको सेवा गर्न, के के भने । तर, जसले जे भने पनि सबैको स्वार्थ आखिरमा पैसा नै हो ।”
“त्यो त हो ....”
उनले मेरो कुरा नसुनी बोलिरहे ।
“समाज सेवा, दुःखीहरुको सेवा गर्न डक्टर नै बन्न पर्छ त, ब्रो ? पर्दैन नि । अहिले जो–जो ले समाज सेवा गर्न पढेका थिए, एउटा क्लिनिकदेखि अर्को क्लिनिक गर्दै बसिरहेका होलान् । तर, सबै त्यस्ता पनि हुँदैनन् । कोही त निःस्वार्थ आप्mनो पेसा गर्ने पनि हुन्छन् । मैले कति पटक त हस्पिटल आएर बिचल्ली परेकाहरुलाई सहयोग गरेको छु । खाना खुवाएको छु, घर फर्किने भाडा दिएको छु । तर कतिलाई गर्ने त ? नेपालमा जो देख्यो त्यसैलाई सहयोगको आवश्यकता छ । झन् यो हेल्थ सेक्टरमा त बिजोग नै छ ।”
‘यो पनि त बिजोग नै हो नि साथी । उता तिम्रा बिरामीहरु बिजोग हालतमा छन्, यता तिमी बिजोग हालतमा छौ,’ भनूँ कि नभनूँ भएँ ।
“अनि त्यहाँ डक्टर पढेपछि यहाँ पनि डक्टरको काम पाइन्न र ?”, मैले मुख नखोली रहन सकिनँ ।
“वहाँ र यहाँको सिस्टम नै फरक पर्दो रै’छ । ट्रिट्मेन्ट अनि मेडिकेशन, सबै फरक तरिका । यहाँ आएर फेरि केके पढ्न पर्ने, अलि झन्झट रै’छ ।”
“समाचारमा चाहिँ जिपि कम छन् यहाँ भन्छन् । खोइ के हो के । तर ट्राइ गर्दा हुन्छ नि त !” मैले भनेँ ।
“बाफ्रे, पढ्दा–पढ्दा हैरान भएर बल्ल अलि फूर्सद भ’को छ । त्यही पनि म त दुई वर्ष नेपालमै काम गरेर वाक्क भएँ । दिनरात केही भन्न पाउनु होइन, बिरामीको उपचार ग¥यो ग¥यो, केही भइहाल्यो भने बिरामीका आफन्तहरु आएर कतिबेला टाउको फुटाउने हुन् भन्ने डर । कहिले होला यस्तोबाट छुट्कारा भनेर हिँडेको । अनि फेरि त्यहाँ खतरा मोलेर कमाउने पैसा यहाँ बारमा गरेर कमाइरा’छु । यही ठीक ब्रो ।”
क्लास पनि सकियो । हामी छुट्टियौँ । उनलाई फेसबुकमा खोज्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेँ उनको नाम टाइप गरेर । ट्रेनमा बसिरहँदा उनलाई सर्च गरेँ । भेटिएन ।
शायद अर्कै नाम राखेको होला ।
“हत्तेरी, अघि सोध्नु पर्ने रै’छ” भनेँ मनमनै ।
अनि फेरि सोचेँ, हुन त देशले यस्ता धेरै डक्टरहरु गुमाइरहेको छ । मैले त उसलाई गुमाएर के भो ?
आखिर ऊ पनि त आकाशबाट हराएको अर्को एउटा तारा नै त हो नि !